Ɔde Kɔmaa Romafo 1:1-32
Ná Paul pɛ sɛ ɔkɔ Roma (8-15)
Ɔtreneeni de, gyidi na ɛbɛma wanya nkwa (16, 17)
Nnipa a wɔnam kwammɔne so nni anoyi biara (18-32)
Onyankopɔn suban ahorow da adi wɔ nneɛma a wabɔ mu (20)
1 Me Paul, meyɛ Kristo Yesu akoa a wɔafrɛ me sɛ memmɛyɛ ɔsomafo. Wɔayi me asi hɔ sɛ menka Onyankopɔn asɛmpa no,+ 2 asɛmpa a ɔnam n’adiyifo so hyɛɛ ho bɔ too hɔ wɔ Kyerɛw kronkron no mu no. 3 Asɛmpa no fa ne Ba no ho. Wɔwoo no honam mu sɛ Dawid aseni,*+ 4 nanso wɔnam honhom a ɛyɛ kronkron no tumi so nyan no fii awufo mu+ ma ɛdaa adi sɛ ɔyɛ Onyankopɔn Ba.+ Ɔno ne yɛn Awurade Yesu Kristo. 5 Yɛnam no so anya adom ne asomafo adwuma+ sɛnea ɛbɛyɛ a aman nyinaa begye no adi na wɔayɛ osetie ama no+ na ama wɔahyɛ ne din anuonyam. 6 Saa aman no mu na mo nso, wɔafrɛ mo ama moabɛyɛ Yesu Kristo dea. 7 Merekyerɛw akɔma Onyankopɔn adɔfo a wɔwɔ Roma a wɔafrɛ wɔn abɛyɛ akronkronfo nyinaa: Yɛn Agya Nyankopɔn ne Awurade Yesu Kristo adom ne asomdwoe nka mo. 8 Nea edi kan koraa no, menam Yesu Kristo so da me Nyankopɔn ase wɔ mo nyinaa mo ho, efisɛ wɔka mo gyidi ho asɛm wɔ wiase baabiara. 9 Na Onyankopɔn a mede me honhom* som no a enti meka ne Ba no ho asɛmpa no, ɔno ne me dansefo sɛ mebɔ mo din daa wɔ me mpaebɔ mu a minnyae,+ 10 na mesrɛ daa sɛ, sɛ Onyankopɔn pɛ, na sɛ ɛbɛyɛ yiye nko ara de a, afei de, metumi aba mo nkyɛn. 11 Efisɛ me ho pere me sɛ mehu mo, na mama mo honhom mu akyɛde bi sɛnea ɛbɛyɛ a mo ase betim wɔ gyidi no mu; 12 anaa me ne mo nyinaa, obiara de ne gyidi bɛhyɛ ne yɔnko nkuran.+ 13 Nanso anuanom, mepɛ sɛ muhu sɛ mayɛ m’adwene mpɛn pii sɛ mɛba mo nkyɛn na mabenya aba bi wɔ mo mu sɛnea minyae wɔ aman a aka no mu no. Nanso wɔasiw me kwan abesi nnɛ. 14 Mede Greecefo ne ahɔho* ka, mede anyansafo ne wɔn a wonni nimdeɛ nyinaa ka; 15 enti me ho pere me sɛ mɛka asɛmpa no akyerɛ mo a mowɔ Roma+ no nso. 16 Na m’ani nwu asɛmpa no ho;+ nokwarem no, ɛyɛ Onyankopɔn tumi a ɔde gye obiara a ɔwɔ gyidi nkwa,+ Yudani na odi kan,+ na afei Greeceni adi hɔ.+ 17 Efisɛ wɔn a wɔwɔ gyidi no hu sɛ, Onyankopɔn nam asɛmpa no so yi ne trenee adi, na ɛno ma wɔn gyidi yɛ den,+ sɛnea wɔakyerɛw sɛ: “Ɔtreneeni de, gyidi na ɛbɛma wanya nkwa.”+ 18 Na nnipa a wɔnam kwammɔne so siw nokware no kwan+ no, wɔreyi Onyankopɔn abufuw+ adi fi soro atia wɔn bɔne ne wɔn mmarato nyinaa, 19 efisɛ nea wobetumi ahu afa Onyankopɔn ho no, ɛda adi pefee wɔ wɔn mu; Onyankopɔn ma wohuu no pefee.+ 20 Efisɛ ne suban ahorow a nnipa ntumi nhu, a ɛno ne ne tumi a ɛwɔ hɔ daa+ ne Onyankopɔn ko a ɔyɛ*+ no, ada adi pefee fi bere a ɔbɔɔ wiase, na wɔnam nneɛma a wayɛ so na ehu,+ enti wonni anoyi biara. 21 Ɛwom sɛ wonim Onyankopɔn de, nanso wɔanhyɛ no anuonyam sɛ Onyankopɔn, na wɔanna no ase nso. Mmom, wodwen adehunu ho, na wɔn koma a ennim nyansa no duruu sum.+ 22 Ɛwom, na wɔka sɛ wonim nyansa, nanso wɔbɛyɛɛ nkwaseafo, 23 na Onyankopɔn a ɔmporɔw no, wɔmaa n’anuonyam bɛyɛɛ sɛ onipa a ɔporɔw honi, ne nnomaa ne mmoa a wɔn nan yɛ anan ne awɔ ne nketew* a wɔporɔw nso ahoni.+ 24 Esiane sɛ wɔpɛ sɛ wodi wɔn koma mu akɔnnɔ akyi nti, Onyankopɔn gyaa wɔn maa ɔbra fĩ,* sɛnea ɛbɛyɛ a ebegu wɔn nipadua ho fĩ wɔ wɔn mu. 25 Wɔde Onyankopɔn ho nsɛm a ɛyɛ nokware no sesaa atoro, na wodii abɔde ni, na wɔsom abɔde sen sɛ anka wɔbɛsom Ɔbɔadeɛ no. Ɔno na ayeyi nka no daa daa. Amen. 26 Ɛno nti na Onyankopɔn gyaa wɔn maa nna ho akɔnnɔ a ɛyɛ aniwu,+ efisɛ wɔn mmea de nna mu nkitahodi a ɛyɛ ne kwan so no sesaa nea ɛnyɛ ne kwan so.+ 27 Saa ara na mmarima no nso gyaa wɔne mmea nna mu nkitahodi a ɛyɛ ne kwan so no. Wɔmaa wɔn yɔnko mmarima ho akɔnnɔ dɛwee wɔ wɔn mu,+ na mmarima ne mmarima yɛɛ aniwude.* Na asotwe* a ɛfata wɔn bɔne no, wonyaa ne nyinaa wɔ wɔn mu.+ 28 Esiane sɛ wɔanhu sɛ ɛfata sɛ wogye Onyankopɔn tom* nti, Onyankopɔn nso gyaa wɔn maa adwene a ɛmfata sɛ wɔnyɛ nneɛma a ɛnsɛ.+ 29 Na nea ɛnteɛ nyinaa ayɛ wɔn ma;+ amumɔyɛ, adifudepɛ,*+ ne bɔne. Na ahoɔyaw adidi wɔn mu;+ efisɛ awudi,+ mansotwe, nnaadaa,+ ne adwemmɔne+ ayɛ wɔn ma; wotutu nsɛm gu nkurɔfo asom,* 30 wɔn ano yɛ yaw,+ wɔtan Onyankopɔn, wommu ade,* wɔyɛ ahantan, wɔhoahoa wɔn ho, wɔbɔ pɔw bɔne,* wontie wɔn awofo asɛm,+ 31 wonni ntease,+ wɔsɛe apam, wonni tema, na wɔn tirim yɛ den. 32 Ɛwom sɛ saa nkurɔfo yi nim Onyankopɔn atemmu* a ɛteɛ no yiye paa sɛ wɔn a wɔyɛ saa nneɛma no fata owu,+ nanso wɔkɔ so yɛ saa nneɛma no, na wɔn a wɔyɛ bi no nso, wogye wɔn tom.
^ Anaa “me ho nyinaa; me koma nyinaa.”
^ Anaa “wɔn a wɔnyɛ Greecefo.” Nt., “pɔtɔfo.”
^ Anaa “ne Nyamesu.”
^ Anaa “mmoa a wɔwea fam.”
^ Anaa “adapaade.”
^ Anaa “akatua.”
^ Anaa “wɔampɛ sɛ wohu Onyankopɔn wɔ nokware nimdeɛ mu.”
^ Anaa “wodi nseku.”
^ Anaa “wɔyɛ aniammɔnho.”
^ Anaa “wɔyɛ nneɛma bɔne kɔfabae.”
^ Anaa “ahyɛde.”